सरकार कुनै क्षेत्रमा पनि सफल हुन सकेन : कांग्रेस नेता सिंह | Nagarik News - Nepal Republic Media
सरकार कुनै क्षेत्रमा पनि सफल हुन सकेन : कांग्रेस नेता सिंह
१० भाद्र २०७५ ६ मिनेट पाठ
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले वर्तमान सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको दाबी गरेका छन्। पानीजहाज चलाउने सपना देखाउनेले सडकका खाल्डा खुल्डीसमेत पुर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना पनि गरे। मंगलादेवी सिंहको २२ औं स्मृति दिवसको अवसरमा आइतबार बिहान काठमाडौंको शोभा भगवतीमा नेपाल महिला संघ काठमाडौं जिल्ला समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको बताए। 'दुई तिहाइ बल भएको सरकारले उल्लेख्य, क्रान्तिकारी र जनतालाई छुने खालको कार्यक्रम ल्याउन सकेन,' उनले भने, 'सरकार कुनै क्षेत्रमा पनि सफल हुन सकेको छैन। दुई तिहाइको सरकार आएदेखि बढेको मूल्य हेर्दा पनि जनतालाई मार परेको छ।'
बलात्कार र हत्याका घटनाहरु नरोकिएको, शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको, मूल्यवृद्धि रोक्न नसकेको र विकासका कुरामात्र गरेको तर काम नगरेकोलाई उनले सरकारको असफलताको रुपमा व्याख्या गरे। कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा सरकारले नै राजनीतिक रंग दिन खाजेको र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप उनले लगाए। पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता सिंहले भने, 'कञ्चनपुरमा बलात्कार गरेर हत्या गरेको घटनालाई ट्वीस्ट गरेर, राजनीतिक रंग दिन खोजेर, अपराधिलाई छुटाउने प्रयास सरकारले गर्‍यो।' विकास निर्माणका ठूलठूला नारा दिने सरकारले सडकका साना खाल्डासमेत पुर्न नसेकेको भन्दै आलोचना गरे। उनले भने, 'विकास निर्माणको कुरामा पनि केबल नारामात्र अगाडि सार्ने काम भएको छ । पानीजहाजदेखि रेलको कुरा गर्ने तर सडकका खाल्डाखुल्टी नपुर्ने ?' 'ल एण्ड अर्डरको कुरामा पनि टोटल्ली यो सरकार विफल भएको छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने कुरामा पनि शतप्रतिशत विफल भएको छ,' नेता सिंहले भने, 'बिहानदेखि साँझसम्म जनतालाई पिरोलीरहने सानातिना समस्याको ट्याकल गर्न नसक्ने सरकारले ठूलठूला कुराहरु गरेर कहाँबाट सफल हुन सक्छ ?' वर्तमान सरकारले जनताको भलाइमा होइन, अहितमा धेरै गतिविधि गरिरहेको नेता सिंहले आरोप लगाए। उनले भने, 'समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने ठाउँमा त्यसलाई अधोगतितिर लगिरहेको भनेर जनताले नै भनिरहेको कुराबाट यो सरकार के कस्तो भन्ने कुरा त्यहीँबाट थाहा हुन्छ।
फरक प्रसंगमा नेता सिंहले महासमितिको बैठक पूर्वघोषित मितिभन्दा तीन महिना पछि सार्ने निर्णय गलत भएको बताएका छन्। यसबाट पार्टी नेतृत्व असक्षम छ भन्ने थप पुष्टि भएको उनले बताए। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको शनिबारको बैठकले भदौमा हुने भनिएको महासमिति बैठक मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले नै भदौमा महासमिति बैठक गराउने घोषणा गरेका थिए। नेता सिंहले भने, 'हिजोको निर्णयबाट विगतमा कांग्रेसको जुन छवि थियो, त्यो छविमा ह्रास आएको छ। यसबाट लिडरसीपमा पार्टीलाई सहमतिका साथ, समझदारीका साथ अगाडि बढाउन नसक्ने कमजोरी भएको स्पष्ट हुन्छ।' उनले अगाडि भने, 'डेट दिने र त्यसलाई सार्दै काम भयो। वर्तमान कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेका पार्टी सभापति लगायतका नेताहरुबाट कांग्रेसको विगतको इतिहासमा कहिल्यै नभएको कुराहरु भयो। यसलाई विशेषरुपमा नेतृत्वकै कमजोरीको रुपमा हामी लिन्छौं।'
उनले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले महासमिति बैठकको मिति सार्ने बहुमतको निर्णयलाई भने आफूहरुले स्वीकारेको बताए। तर, यस्ता निर्णयको जनताले मूल्यांकन गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, 'डेमोक्रेटिक पार्टी हो, बहुमतको डिसिजनलाई हामी मान्छौं । तर पब्लिकले पनि त जजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ नि त । आम जनताले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि कांग्रेस, पहिलाको कांग्रेस रहेन अब ।' उनले कांग्रेसलाई सुधार्न पार्टीभित्र ठूलै अभियान सुरु भइसकेको दाबीसमेत गरे। त्यसको प्रतिफल छिट्टै आउने पनि उनले बताए। कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री समेत रहेका नेता सिंहले भने, 'पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउनका लागि पार्टीभित्र ठूलै अभियान अगाडि बढिसकेको छ। आउँदा दिनमा सबैले त्यसको प्रतिफल देख्नुहुन्छ।'
प्रकाशित: १० भाद्र २०७५ १३:३७ आइतबार
कांग्रेस प्रकाशमान_सिंह सरकार
‘असार २६देखि देशैभर ठूलो बाढीको सम्भावना छ, हाेसियारी थालौं’
नेकपालाई फुट्न नदिने हो भने...
जारी स्थायी समिति बैठकबाट औपचारिक र ठोस निर्णय गर्नुअघि अविश्वास घटाएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने विषयमा नेताबीचको व्यापक छलफल त चलिरहेका छन्, तर त्यो सकारात्मक दिशामा देखिँदैन ।
चितवनमा सोती नरसंहारको विरोध प्रदर्शन
रुकुम पश्चिमको सोतीमा भएको नरसंहारको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै चितवनको रत्ननगरमा मङ्गलबार विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
पहिरोको जोखिममा स्थानीय तह, विपद् व्यवस्थापन योजना छैन
बैतडीका ८ वटा स्थानीय स्थानीय तह पहिरोको जोखिममा छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये पुर्चौडी नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका पहिरोको जोखिममा रहेका छन् ।
कर्जाको सावाँ र ब्याजको ताकेता नगर्न होटल संघको आग्रह
पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा विस्तारै चलहपहल बढ्दै गएपनि पर्यटकीय क्षेत्र पनि सुस्ताईरहेको छ । खुकुलो लकडाउनमै व्यस्त बजारका व्यापारिक पसलहरू खुल्दै सहज हुदैं गएका छन्। पर्यटकीय क्षेत्र बौरिन अझै समय लाग्ने छ । कोभिड १९ को महामारी छ । दैनिक सयौंको सख्या कोरोना संक्रमित थपिदैं गएका छन्। पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ ।